Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A June 2011 (3)
Q and A June 2011 (3)
1. သမီးက နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည်တခုမှာ ပညာသင်နေတဲ့သူ တယောက်ပါ။
2. ကျနော့် ကောင်မလေးအကြောင်း နည်းနည်းသိချင်လို့
3. ကျွန်တော်အသက်က ၂ဝ နှစ် ရှိပါပြီ။
4. ကျွန်မအသက်က (၄၆)နှစ်ထဲမှာပါ။
5. ကောင်မလေးနဲ့ ကျနော်လွန်ခဲ့တဲ့
6. ရန်ကုန်ကို အလုပ်က ၇ ရက်ခွင့်ရပါတယ်။
7. သမီးရဲ့အမျိုးသားက အသက် ၃၂ နှစ်ပါ။
သမီးက နိုင်ငံခြား တိုင်းပြည်တခုမှာ ပညာသင်နေတဲ့သူ တယောက်ပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်းက ၃ ရက်လောက် သမီး အပြင်းအထန်ဖျားပါတယ်။ ဖျားပြီးတော့ အံ့ဆုံးလို့ ခေါ်မလား မသိဘူး နောက်ဆုံးသွားရဲ့ နောက်က သွားဖုံးက တအားနာတယ်။ တပါတ်လောက် ရှိပါပြီ။ အခုထိနာတုန်းပါ။ အစာကို မစားနိုင်ပါဘူး။ စွပ်ပြုတ်နဲ့ နွားနို့ juice တို့လို အရည်ပဲ သောက်နေရပါတယ်။ ဖျားပြီး ၃ရက်လောက်ကြာတော့ အဖျားပြတ်သွားတော့ ဆေးရုံကို သွားပြီး ပြပါတယ်။ သွားဖုံးက ဖြစ်တဲ့ ကိစ္စကို သွားပြတာပါ။ antibiotic တွေပေးပြီး သွေးစစ်ပါတယ်။ သွေးစစ်တော့ ရလာတဲ့ result က သွေးနီဥတွေ၊ သွေးဖြူဥတွေ နည်းနေတယ်တဲ့။ အဲဒါကြောင့် ထပ်ပြီး စစ်ခိုင်းလို့ ထပ်စစ်ရတယ်။ အခု ၂ခါ စစ်ပြီးပါပြီ။ နောက်တခါ စစ်ရဦးမယ်လို့လည်း ပြောပါသေးတယ်။ သမီးအနေနဲ့ သိချင်တာက ဒီဟာက စိုးရိမ်ရလား။ ဘယ်လို အနေအထားမျိုးမှာ ဖြစ်တတ်တာလဲ။ မကြာခဏဆိုသလို သွားဖုံးက နာတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လစဉ် ဓမ္မတာကိစ္စ နောက်ကျတဲ့ အချိန်တွေမှာ နာတတ်ပါတယ်။ အခုတခါက အတော်ကို ဆိုးပါတယ်။ အရင်က နာတာနဲ့ မတူပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်လောက်တုန်းက ပါးစောင်က တအားနာပြီး ကိုက်လို့ operation လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒီတုန်းကတော့ သွေးပြည်တွေ ထွက်သွားပါတယ်။ သမီးက မကြာခင်မှာ စာတမ်းလည်း ဖတ်ရတော့မှာဆိုတော့ ဘာလုပ်ရမယ် မသိဖြစ်နေတာပါ။ ဆေးစစ်ချက် result တွေကိုပါ တခါတည်း ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ လေးစာစွာဖြင့်
• အံဆုံးပေါက်ရင် နာတဲ့သူတွေမှာ အတော်နာတယ်။ Pain killer နဲ့ Antibiotics ၄-၅ ရက်ဆို ရပါမယ်။ ဆားရည်ခပ်နွေးနွေးနဲ့ ပလုပ်ကျင်းပေးပါ။
• သွေးအဖြေတွေအရ ဟုတ်တယ် နဲနဲလေး လိုတာလေးတွေ တွေ့ရတယ်။ Hb and RBC သွေးနီဥ နည်းတာ အမျိုးသမီးအတော်များများမှာ ရှိတတ်တယ်။ သံဓါတ်အားဆေး ပုံမှန် အမြဲသောက်ပါ။ Folic acid လဲသောက်ပါ။
• WBC သွေးဖြူဥနည်းတာနဲ့ သွားဖုံးနာတာနဲ့က ပြောင်းပြန်လိုဖြစ်နေတယ်။ အင်ဖက်ရှင် ဝင်နေပုံမရဘူး။
• Platelets သွေးမှုံနည်းတာတော့ ဂရုစိုက်ရမယ်။ ဒါ့ကြောင့် သွေးယိုစေတတ်တယ်။ သိပ်မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ သွေးယိုတာတခုဘဲ သတိထားရတာပါ။ သွေးမှုံသွင်းလောက်အောင် မဆိုးပါ။ Vitamin C လဲသောက်ရင် ကောင်းပါတယ်။
• ဆေးဆက်စစ်စရာ စစ်ပါ။ လိုတာပြောပါလိမ့်မယ်။
• ကျန်းမာ-ချမ်းသာ၊ စာတွေ အများကြီး တတ်ပါစေ။
ကျနော့် ကောင်မလေးအကြောင်း နည်းနည်းသိချင်လိူ့ ဖြေပေးပါနော်။ ကျနော့် ကောင်မလေးအသက်က ၁၈ နှစ်ပါ။ အဖြူဆင်းတယ်လို့ ပြောတယ်။ ဘာကြောင့် ဆင်းတယ်ဆိုတာ ပြောပြပေးပါ။ နောက်ပြီး အဲဒါဆင်းတာက အန္တရာယ် ရှိလားဆိုတာလဲ ပြောပြပေးပါ။ မဆင်းရအောင်ဘာဆေးသောက်ရမလဲဆိုတာလဲ ပြောပြပေးပါ။ ကျနော် ဖြစ်တာလဲ ဖြေပေးပါနော်။ ကျနော်က တံထွေး ခနခနထွက်နေလို့ အဲဒါဘာကြောင့်လဲ။ သူငယ်ချင်းတွေက ပြောတယ် တံထွေး ခနခနထွက်ရင် သေးခနခနထွက်တယ်လို့ ပြောတယ်။ ဟုတ်တယ်ဗျာ ကျနော်သေးခနခနတော့ ထွက်တယ်။ အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ်ရင် ပျောက်မလဲဆိုတာဖြေပေးပါ။
ကျွန်တော်အသက်က ၂ဝ နှစ် ရှိပါပြီ။ ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ဝန် မရအောင် ကွန်ဒုံး စွတ်ပြီး ပြုလုပ်ရပါတယ်လို့သိပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒေါက်တာ ရေးထားတဲ့ ဘဘော့လ်တွေကိုလဲ ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်သိချင်တာလေးက ကွန်ဒုံးမစွတ်ဘဲ ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ အချိန်လေးကို သိချင်လို့ပါ။"
• Calendar method ပြက္ခဒိန်နည်း အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၅ဝ)
ကျွန်မအသက်က (၄၆)နှစ်ထဲမှာပါ။ အိမ်ထောင်သည်ပါ။ ခလေးတော့ မရှိပါဘူးရှင်။ အမျိုးသမီးများ ဘယ်အချိ်န်လောက် သွေးဆုံးပါလဲရှင်။ သွေးမဆုံးခင် ဘယ်လိုလက္ခဏာတွေ ပြပါသလဲ။ သွေးဆုံးကိုင်တယ်ဆိုတာ ဘာကို ပြောတာပါလဲ။ သွေးဆုံးမကိုင်အောင်ဘာတွေ ဆောင်ဖို့၊ ရှောင်ဖို့လိုပါသလဲ။ သားအိမ်ခေါင်းကာကွယ်ဆေး ထိုးချင်လို့၊ အဲဒီဆေးကို ဘယ်လို ခေါ်ပါသလဲရှင်။ ကျွန်မအသက်အရွယ်နဲ့ တခြားအမျိုးသမီးနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ ဘယ်လို ကာကွယ်ဆေးတွေ ထိုးသင့်ပါသလဲ။ အဲဒီဆေးတွေထိုးပြီးရင်ကော side effects ရှိပါသလား။ ကျွန်မက tonsil လဲ ရှိတယ်၊ မဖြစ်တာကတော့ (၈)နှစ်လောက်ရှိပြီးမှပြီးခဲ့တဲ့(၂)လလောက်ကထပ်ဖြစ်လို့ ဆရာဝန်ဆီသွားပြတာ Amoxicillin သောက်ရသေးတယ်။ ပြီးတော့ကျွန်မက caffeine လဲ အရမ်းများနေပါတယ်။ decaffeinated သောက်ရင်တောင် ရင်တုန်ချင်တယ်။ regular coffee သောက်မိရင်လဲ ရင်တုန်လို့ မပြီးတော့ပါဘူး၊ တခါတလေ အားပြတ်ပြီး၊ လက်ဖျားတွေ အေးစက်လာပြီး မေ့လဲတော့မလိုတောင် ဖြစ်တယ်။ အမျိုးသမီး အားဆေးတလုံးနဲ့ vitamin E တလုံး, Vitamin C တလုံး တွေကို တနေ့တလုံး ပုံမှန်သောက်ရုံနဲ့လုံလောက်ပါသလား။
• Menopause သွေဆုံး-သားဆုံး
ကောင်မလေးနဲ့ ကျနော်လွန်ခဲ့တဲ့ တလလောက်က တူတူနေဖူးတယ်။ သူ ရာသီလာတဲ့အချိန်မှာ နေဖူးတာပါ။
ခနဘဲနေတာပါ။ အဖော်လဲသုံးပါတယ်။ သူနဲ့နေပြီးတော့ သူရာသီလာပါသေးတယ်။ ခုတလော အဖြူဆင်းတယ်ပြောလို့ ကိုယ်ဝန်ရှိလို့လား။ မဟုတ်လောက်ပါဘူးနော်။ ကျနော်နဲ့နေပြီး ရာသီလဲ လာပါတယ်။
• ကိုယ်ဝန် မဟုတ်နိုင်ပါ။ Vaginal Discharge မွေးလမ်းကြောင်းမှ အဖြူဆင်းခြင်း အသက် (၁၈) နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၅၈)
ကျွန်တော်ရဲ့ အမျိုးသမီးဟာ အလုံးရှိသောကြောင့် သားအိမ်ကို ထုတ်ထားတာ ၁ နှစ် ခန့်ရှိပါပြီ။ သားအိမ် မရှိသောကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဆက်ဆံသောအခါ အရင်လို သုတ်ကို အတွင်းတွင် လွတ်လို့ရနိုင်ပါသလား။ ဒီအတွက် သူ့မှာ တခုခု နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါသလား။
• ရပါတယ်။ ကလေးမရတာကလွဲရင် ဘာမှ မထူးပါ။ သုတ်ပိုးက မွေးလမ်းထဲမှာသာ ရှိနေမယ်။ မကြာခင် သူ့အလိုလို ပျက်စီးသွားမယ်။ သာမှမဖြစ်စေနိုင်ပါ။ သူ့ကိုလဲ စိတ်ဓါတ်ပြောင်းစရာမလိုတာပြောပြပါ။
ကျွန်တော် (့) ကနေ ရန်ကုန်ကို အလုပ်က ၇ ရက်ခွင့်ရပါတယ်။ အိမ်ပြန်လို့ အိမ်ရှင်မနဲ့ လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ စရောက်သည့်နေ့မှ ပြန်ရက် ၇ ရက်အထိ ကိုယ်ဝန်မဆောင် ရအောင် မည်သည့်ဆေးကို တိုက်ရမည်ကို ပြောပြပေးပါ။ Condom လဲ မသုံးချင်လို့ပါ။
• Different Methods of Contraception ပဋိသန္ဓေတားနည်းများ အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၁၄)
သမီးရဲ့အမျိုးသားက အသက် ၃၂ နှစ်ပါ။ သမီးက အသက် ၂၅ နှစ်ပါ။ အိမ်ထောင်သက် ၃ နှစ်ရှိပါပြီ။ ချစ်သူဖြစ်ပြီးမှ အိမ်ထောင်ပြုတာပါ။ သူကောသမီးပါ စာသင်တဲ့ အလုပ် လုပ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးလည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ နှစ်ယောက်ထဲ နေတာပါရှင့်။ အိမ်ထောင်သက် ၁ နှစ် ၂ နှစ်တုန်းက လိင်ဆက်ဆံမှုကို တစ်ပတ် သုံးလေးကြိမ် ပြုလုပ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ နှစ်လောက်ကစပြီး သုံးလေးလ မှ တစ်ခါသာ ပြုလုပ်တော့ပါတယ်။ ချစ်ချစ် ခင်ခင် ရှိရဲ့နဲ့ ဘာလို့ ဒီလိုဖြစ်တာပါလဲဆရာ။ သူနဲ့ သမီးနဲ့က တနေကုန် အတူတူရှိ နေတဲ့အတွက် သူဖောက်ပြန်နေတာ မဟုတ်ပါ။ အလုပ်ထဲမှာရော အပြင်မှာပါ သမီးအပေါ် ချစ်ချစ်ခင်ခင်ရှိပါတယ်။ အိပ်ယာထဲရောက်တာနဲ့ကိုယ်အိပ်ချင်ပြီ ဆိုပြီး ပြောပါတယ်။ ပင်ပင်ပန်းပန်း အလုပ်လုပ်ရတာ မဟုတ်ပါ။ (၁)သမီးသိချင်တာက သူ့မှာရောဂါ တစ်ခုခုရှိ နေသလား။ (၂)ရောဂါမရှိရင်လဲ ဒီပုံစံ လိင်ဆက်ဆံမှုဟာ ပုံမှန် ဟုတ်ပါသလား။ (၃)သူ့အတွက် ဘာဆေးသောက်သင့်သလဲ။ (၄)ဘယ်လို အပြုအမူတွေ အနေအထိုင်တွေ ပြုလုပ်သင့်ပါသလဲ။
• Aphrodisiac လိင်စိတ်အားပေး အစာနဲ့ ဆေးများ အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်မှ ဖတ်ပါ (၃ဝ)
Posted by Dr. Tint Swe at 3:26 PM